Cawaaqibta Diidmada Shakiga Habkaaga iyo Descartes - Rabbi Michael Avraham
Cawaaqibta diidmada shakiga habkaaga iyo Descartes
Jawaabta > Qaybta: Guud > Cawaaqibta diidmada shakiga habkaaga iyo Descartes
Macquul ah Waxaa la weydiiyay 2 sano ka hor
Waxa aan rabay in aan wax ka weydiiyo wax aan kula kulmay mareegta Towbad keenka,
Waxaa jirta su'aal caan ah oo Kant ah oo ah in aysan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya mawduuca iyo adduunka oo dhan oo u muuqda mid fudud, markaa su'aashu waxay soo baxaysaa sida aan ugu kalsoonaan karno malo-qaadkeena in uu jiro xiriir ka dhexeeya adduunka iyo bani-aadmiga. Midda kale, suurtagal maaha in caddaynta noocaas ah la bixiyo, sababtoo ah mar walba waxaynu la kulmi jirnay su'aalo dib-u-noqosho ah, laakiin waxay u muuqataa in kuwa aan shaki ku jirin inay aqbalaan fikradda ah in fikradaha aasaasiga ah aysan keenin caddayn iyo gaar ahaan in tani ay tahay qeexitaankooda oo ah. axiom.
Haddaba waxaan rabay in aan weydiiyo, mala-awaalka liddiga ku ah ee ah in wax aan sabab lahayn ay su’aal ka taagan tahay, lafteedu ma male?
Hadday sidaas tahay, waxay u muuqataa inaynu hayno nooc ka mid ah waajibaadyada si aan u qaadanno hubaal ku saabsan male-awaalkeena aasaasiga ah, laakiin inta la og yahay rabbaanku ma aqbalo tan, laakiin wuxuu ku beddelayaa hubaal ahaanshaha macquul ah, laakiin waa sida ay ku habboon tahay sheekada? Suurtagalnimada ixtimaalku waxay u malaynaysaa inaad aqbashay sheegashada shakiga leh ee maya?
Sidoo kale, waxaan mar kaliya la yimid su'aal ku saabsan Descartes, oo sida uu sheegay aan u muuqan in ay wada heleen, laakiin kaliya waxaa mahad leh caddaynta ontological iyo in Ilaah uu ku fiican yahay inuu isku dayo inuu xalliyo arrintan, laakiin sidee buu u qaatay in wanaagsan. ujeedadu waa?
Ma hubo inaan fahmay su'aasha. Si kastaba ha ahaatee, waxaan wax yar ka faalloon doonaa waxaad tidhi:
Kant ma yiraahdo ma jiro xiriir ka dhexeeya aragtideena iyo adduunka. Waxaa hubaal ah inuu jiro xiriir, iyo in ka badan sida. Waxa uu kaliya ku andacoonayaa in sawirka aan aragno uu yahay wax miyir qaba. Laakiin isagu wuxuu u taagan yahay ifafaalaha adduunka laftiisa. Tusaale ahaan, mowjadda elektromagnetic-ka ee adduunka ayaa u tarjuma iftiinka miyirkeenna. Ma wax xidhiidh ah oo ka dhexeeya ma jiro? Waxaa cad inuu jiro xiriir. Iftiinku waa muuqaalka muuqaalka hirarka korantada.
Waxaa jirta su'aal ka soo baxday Kant, waa meesha uu xitaa og yahay in ay jirto adduun nafteeda ah haddii waxa kaliya ee la heli karo ay tahay oo kaliya ifafaale ( ifafaale garashada ). Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay natiijada mabda'a sababaha, kaas oo ah mabda'a mudnaanta leh. Laga soo bilaabo mabda'an waxay soo socotaa in haddii ay jirto ifafaale miyir leh waa inay jiraan wax adduunka ka mid ah oo keena.
Maan fahmin su'aasha ku saabsan wax aan sabab lahayn. Ma doonaysaa inaad waydiiso inay jiraan waxyaabo sabab la'aan? Mabda 'ahaan waa suurtagal haa, laakiin mabda'a sababtu ma malaynayso. Aragtida quantum-ka, tusaale ahaan, xidhiidhka ka dhexeeya sababta iyo saamayntu way ka duwan tahay oo xataa dhab ahaantii ma jiro dareenka caadiga ah.
Waxaad isku darsataa hubaal iyo run. Taas oo aan filayo in aysan jirin wax la hubo ma khusayso dooda sinaba.
Shakigu wuxuu ka soo horjeedaa macquulnimada. Shakigu waxa uu u malaynayaa in hubaal kaliya ay runta bixinayso, sida ay uga soo baxayso waxa aad leedahay. Laakiin taas waad ku qaldantahay.
Macquul ah Waxay ku jawaabtay 2 sano ka hor
Aad baad ugu mahadsantahay faallooyinka qaarkood aan fahmay waxaan isku dayi doonaa inaan caddeeyo qaybo aanan fahmin.
2. Waxaan sidoo kale wax ka waydiiyay qodobkan. Qof kasta oo aan shaki ku jirin wuxuu u muuqdaa inuu ku raacsan yahay in ay jirto xiriir ka dhexeeya aduunka iyo ifafaale (indhaha iyo iftiinka Doge 1), laakiin haddii dhammaan miyir-qabkayaga lagu dhiso kaliya mabda'a mudnaanta leh sida sababaha weli way noqon kartaa. loo fasirtay sababo aan la tirin karin sida dareenka dareenka loo abuuray, xitaa Descartes Waa sabab hoos timaada dareenkan ballaaran; Laakiin badideen uma maleyneyno inay tahay sabab sax ah. Haddii ay sidaas tahay, mabda'a sababaha kaligeed uma eka mid ku filan, laakiin waxay u baahan tahay wax dheeraad ah, inkastoo dabcan ay u muuqato in ay tahay asalka.
3. Uma jeedin su'aasha ku saabsan dhacdooyinka ama lagu dabaqi karo, inkastoo dabcan ay jirto xiriir, laakiin inta badan waxay ku saabsan tahay male iyo sheegasho, tusaale ahaan qeexida malo waa in aysan jirin sabab. Waxaan u malaynayaa in tan kaliya wax la rumaysan karo, nooc ka mid ah aragtida ah in Ilaah yahay barroosinka sababaha adduunka. Laakiin haddii aynaan ka shakin malo-awaalka sidee baan u odhan karnaa wax aan la hubin laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay cabbir macquul ah? Ka dib oo dhan, male kasta oo ku saabsan macquulnimada ayaa dhabarka u qaadanaya in su'aalo la iska weydiin karo.
3. Dhanka kale, qofka shakiga ku jira habkiisa ayaa dhab ahaantii doonaya inuu ka shakiyo malo, laakiin haddii ay sidaas tahay, wuxuu sidoo kale shaki gelin karaa malo ah in malo-awaalka la waydiiyo ama wax kasta oo sabab la'aan ah ay khaldan yihiin. Hadday sidaas tahay, ma u muuqataa inuu laantiisa jarayo? Maya?
5/4 Waxaan ula jeeday sida 3 Risha.
3. Waxaad u isticmaashaa ereyga "sabab" si aanan fahmin. Ma waxaad ula jeedaa dhadhanka / caqli-gal?
Run ahaantii ma jirto wax sal ah oo sal-dhis ah. Laakiin run maaha in aanan ka shakiyin mala-awaalka. Ma jirto sheegasho, mala awaal ama gabagabo, iima hubo.
Rationalist Waxay ku jawaabtay 2 sano ka hor
Runtii waxaan ula jeedaa dhinaca caqliga / dhadhanka.
Marka hore, xagga 2 miyaad ogolaatay inaan si fudud u haysanno fikrad ah in waxa aan aragno ay run yihiin? Waayo, uma eka inay ku filnaanayso mabda' kasta oo mudnaanta leh inuu noqdo inuu * keligiis * isku xiri karo aqbalaadda adduunka maaddada.
Haddaba haddii ay sidaas tahay, sidee ayaad ku heli kartaa dhisme laakiin si aan la hubin? Tani waa waxa aad iigu cad.
Oo xataa haddii aad tidhaahdo waa suurtogal, marka la eego waxa ay noqon doonto mid aan la hubin? Marka la eego racfaan kale ama shaki kale? Waxay u badan tahay in shaki la mid ah uu sidoo kale u qaadan doono in uu jiro mid kale, sharraxaad aasaasi ah, iyo isaga, ama marka hore, nidaamka hoose ee sharraxaadda waa axiomatic. Laakiin markaa waxa ay si fudud ula macno tahay in malo-awaalka aynu u malaynaynay in uu ahaa gogol-xaadh ma aha sidaas, laakiin gunaanad laga soo qaatay wax ka sii aasaasi ah.
Haddaanad ka shakin oo aad sheegan in malo-awaal la is waydiin karo mooyaane, laakiin markaa xaggee ixtimaalka ku habboon yahay sawirka? Maxaa yeelay, wax walba isaga u siman yihiin gardarada. (Iyo malaha in wax walba ay gar-qaad yihiin waa gar-daran…)
Oo haddii ay sidaas tahay, ilaa inta aad ka heli sheegashada shaki ka dibna sidoo kale ma jiraan wax ansax ah in xaqiiqda ah in wax u muuqdaan kuwo macquul ah aniga, sababtoo ah itimaalka oo dhan waa oo kaliya in diyaaradda ee macquulnimada maaddada laakiin ma jiraan wax xiriir ah oo u dhexeeya iyada iyo dunida ujeedada iyo marna laguma soo koobi karo hordhac ahaan.
Oo haddii aadan ka shakin, markaa ma su'aalayso mala-awaalka si kastaba…
Garqaadkii u dambeeyay Waxay ku jawaabtay 2 sano ka hor
"Mawjadda korantada ee adduunka ayaa u tarjuma iftiinka"
Mowjadu waxay u tarjumeysaa calaamadaha neerfaha. Wax kale oo loo turjumayo Wax kale
Ma jiro xidhiidh toos ah oo ka dhexeeya iftiinka iyo hirarka. Macnuhu waa mid aad iyo aad dadban.
gabi ahaanba waan ku waayay Waxaad isku darsataa galmada iyo galmo la'aan marar badan, oo ha tixraacin waxaan ku jawaabay. Mar hore ayaan wax walba uga jawaabay.
Garqaade, waa xidhiidh toos ah. Mid baa kan kale sababa, xataa haddii lagu sameeyo dhexdhexaadinta dhawr tillaabo. Marka aad kala furfurto dariiqa u dhexeeya xoqista kabriidka iyo hurinta dabka waxaad ka heli doontaa heerar dhexdhexaad ah. Haddaba waa maxay? Mid baa kan kale sababa. Ma laga yaabaa Nafm haddii ay jiraan heerar dhexdhexaad ah? Iyo inaynu ka hadlayno arrinta awoodda awoodiisa?
Waxay ka jawaabtaa khasaaraha Waxay ku jawaabtay 2 sano ka hor
Haddii aad i weyday sidee ugu jawaabtay?…
Midda aan aniga ii caddayn ayaa ah in la isku raacsan yahay in qeexida dhismaha ay tahay in aanay jirin sabab loo saleeyo.
Laakin haddii ay sidaas tahay, sidee baa go'aan wax looga weydiin karaa iyada oo aan la isticmaalin goob gaar ah? Sida aad sheegtay waad samaynaysaa.
Markaa dhanka kale waxaad helaysaa malo-awaal la is waydiin karo markaa sidee baad u qaadan kartaa inay wax badan yihiin ama ka yar yihiin? Ka dib oo dhan, waxaad sidoo kale gelin kartaa shaki dheeraad ah dareenka itimaalka…? Markaa gabagabadaadu waxay ahayd mid macquul ah inaad noqoto sulfist. Ama waxaad ka shakin doontaa malo ah inaad ka shakin karto oo aad ku dheggan tahay.
Laakiin waa in la sheegaa in bilawga fikirka uu jiro qaar ka mid ah male * qaar * ayaa noqon doona mid yar sida ay tahay.
Tusaale ahaan mala-awaalka ah in waxa aan isleenahay waa macquul dhab ahaantii waa ujeedo (xitaa haddii aysan ahayn qasab maaha). Sababtoo ah halkaas oo kaliya ayaa la odhan karaa in shaqaaluhu u badan tahay, iwm. Laakiin haddii aad tidhaahdo dhammaan malo-awaalkayagu weligood ma yeelanin boqolkiiba boqol oo shaki ku jiro, markaa shakigaas waa in la abuuraa ka dib sheegashooyin shaki leh oo iyaga ka baxsan, iyo inta aad tahay qof shaki leh marnaba ma sheegan kartid in ay wax jiraan. sida macquulka ah sida ay tahay…
Markaa waxaan rabaa in aan sheego in aad sidoo kale ogolaatay in uu jiro wax qadiimi ah oo ku saabsan habkaaga oo wax walba maahan kaliya macquul. Mise suurtagalnimada waa hubaal.
Si kastaba ha noqotee, haddii aan sax ahay, markaa waxa fiican in la arko waa inaad doorbidi lahayd inaad noqoto postmodernist halkii aad ka ahaan lahayd aasaasi 😉
In kastoo aanay jirin wax caddayn ah oo laga hadlayo, Waxay ku jawaabtay 2 sano ka hor
In kasta oo aanay jirin wax caddayn ah oo laga hadlayo, haddana waxaa jira raad ku saabsan ka hadalka hordhaca buugaagta xusuusta ee iimaanka:
"Inta aan ogahay, qofku ma haysto wax suurtagal ah oo uu ku gaari karo hubaal goob kasta." Haddii uu helo hab uu ku gaadho hubaal noocaas ah waxa uu u badan yahay in uu khaldanaa (waa hubaal! 🙂)
Waxay ka dhigan tahay in ay jiraan wax la hubo oo aasaasi ah oo gunta u ah fekerkeena dhammaadka maalinta oo sheegaya in uu jiro iskudubarid ka dhexeeya macquulnimada iyo adduun kale waa in lagu xukumay shaki.
Jawaab, hadda waan ku waayey (maxaad hadda rabtaa) mar haddii aan wax walba ka jawaabay hadda ka hor.
fadhiga? Waxay ku jawaabtay 2 sano ka hor
Habkaagu sidoo kale ma inuu lahaado dhisme gaar ah (xitaa xaddidan), kaas oo aanu ku aqbali doono si hubaal ah ee ma aha oo kaliya macquul.
Waxaanan filayaa in gogol-xaadhayntan ay tahay in waxa caqli-gal inoogu muuqda ay dhab ahaantii macquul tahay oo xidhiidh la leeyahay arrintaas. Sidan oo kaliya ayaan u malaynayaa inay suurtogal tahay in aan ku caddeeyo su'aalahayga aniga oo aan ku dhicin shaki buuxa iyo dhinaca kale in aan la sheegin wax kasta oo la hubo.
Dhanka kale, waxaad markii hore sheegtay inaad runtii samaysay "shaki malaha aasaasiga ah. Ma jirto sheegasho, malo ama gabagabo dhab iima aha."
Laakiin haddii aad runtii ula jeedo waxaad qortay, waa inaad awood u leedahay inaad kala garato fikradda saxda ah iyo inkale ka dibna waa in aad ka shakisaa.
Waxaan u maleynayaa in arrimahani ay fudud yihiin, laakiin maadaama aan arko inaad horeyba u tahay falsafada labaad ee sheega waxyaabo la mid ah markaad labadiinuba sheegtaan inaadan ahayn kuwa casriga casriga ah, waxaan doonayay inaan arko haddii aan run ahaantii saxsanaa ama haddii erayadaydu aysan af lahayn. Oo waxaad cuni kartaa keega oo sidoo kale waad ka tagi kartaa oo dhan.
Sababtoo ah wuxuu sidoo kale aqbalayaa in aysan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya male iyo rabitaankooda aduunka sida uu qabo Kant qof walbana waa inuu su'aalo waydiiyaa, haddana arrimaha kale waxaa jira gabagabo macquul ah… Waxaan halkan ku soo bandhigay.
Mar saddexaad ayaan ku jawaabay: maya. Indhahayga wax hubaal ah ma jiraan. Oo waxaan ku celinayaa markii toddoba iyo tobnaad hubaal la'aantu maaha shaki. Shakiga macnihiisu waxa weeye in boosaska qaar aanu ka roonayn caksigeeda. Hubin la'aanta, dhanka kale, waxay ka dhigan tahay oo kaliya inaanan hubin.
Tani. waan dhameeyay
gabar Waxay ku jawaabtay 2 sano ka hor
Iyo waxa ku saabsan tiir joomatari oo u janjeerta 0. Wax caqli gal ah ayay iila ekaayeen. Waa caqli gal indhahayga in waxa macquul iigu muuqda - ay macquul tahay. Waa caqli gal indhahayga in waxa ay iila muuqato in ay macquul tahay. Waxaan hoos u dhigi doonaa suurtagalnimada 99.99% hubaal oo sheegasho kastaa waxay u rogi doontaa xadka 0% hubaal.
Waxaan qoray wixii aan ka fahmay su'aasha. Maxaa yeelay, haddii ay jawaabtu tahay in "wax ii muuqataa macquul ah" marka aan ku dhejin 99.99, markaas waa 99.99 ka dib markii dhammaan xisaabaadka adduunka, iyo tani waa sheegasho toos ah oo ku saabsan dunida oo aan sheegan nafteyda - markaas waxaan si dhab ah u go'aami xidhiidhka adag ee ka dhexeeya macquulnimada iyo hubaalnimada.
Si buuxda looma fahmin Waxay ku jawaabtay 2 sano ka hor
Sidee loo abuuray mucjisada in aan la hubin balse aysan keenin shaki?
Sababtoo ah fikradda oo dhan ee hubin la'aanta iyo joogitaanka macquulka ah waxay u maleynayaan inay jirto doorasho labaad, laakiin ma lihid awood aad ku qiimeyso waxa macquul ah sababtoo ah lafteeda waa malo kale oo aad sidoo kale weydiin doonto haddii ay macquul tahay ...
Yaabkan mucjisada ah wuxuu ku dhex jiraa farqiga u dhexeeya 90% guduudasho iyo 50% shaki (haddii aan ku adkaysanno in la qiyaaso). In kasta oo ay tani runtii tahay mid cajiib ah oo aan la fahmi karin, haddana way dhici kartaa. Waxaan ku rogaa cube lix milyan jeer. Waxaan sharxayaa in natiijada si siman loo qaybin doono oo ay jiri doonto ilaa hal milyan oo natiijooyin wig kasta. Waxaan shaki ka qabaa (maaha 100%) laakiin wali tani waa waxa dhici doona. Cajiib.
Oo waxaan awood u leeyahay inaan si dareen leh u qiimeeyo qiimaha dareenka sidoo kale. Wareegtadani waa uun gef. Waxay la mid tahay in la weydiiyo sida aad ku garan karto inaad saxan tahay, adiga ayaa go'aaminaya inaad saxan tahay. Sidee ayay tani uga duwan tahay doodda caadiga ah ee shakiga?
Runtii waanu ka daalinay hadalladaas ilaa uu dhiig daato.
Waa maxay xidhiidhka ka dhexeeya tan iyo doodda caadiga ah ee shakiga. Halkan midna laguma waydiiyo "sideed ku taqaan" ee wuu aqbalayaa wax kasta oo uu qofku yidhaahdo oo ka hadlaya uun habkiisa. Haddii uu sheego in uu boqolkiiba boqol hubo in ay wax run yihiin, sidoo kalena uu boqolkiiba boqol hubo in xaaladaha uu boqolkiiba boqol hubo in ay wax run yihiin boqolkiiba boqol in ay wax run yihiin - markaas wax walba waa hagaagsan yihiin sababtoo ah. mid gacanta ku haya wax kasta oo hadhi doona. Laakin haddii ay leedahay ixtimaalka kaliya, markaas goobabada soo noqnoqda ayaa u sii libdheysa ilaa eber. Aad u fudud. Si kastaba ha ahaatee, waxay iila muuqataa mid aad ugu dhow in aysan jirin cid halkan ku taal oo aan ahayn adiga oo garanaya sida tan looga jawaabo. Xitaa haddii aad leedahay jawaab caqli-gal ah ma heli kartid halkan dunta. Sida muuqata SAG waa dambiile oo waxay u kala bedeshay jawaab celin iyo jawaab celin.
Waxaan rajeynayaa inaan garwaaqsaday inaan hore u fahmay Waxay ku jawaabtay 2 sano ka hor
dhab ahaantii. Waxaan ku raacsanahay inay aad u fudud tahay in ugu dambeyntii awoodda lagu qiimeeyo dareenka lafteeda ay tahay aasaas ay tahay inaad aqbasho * hubaal *, xitaa haddii dareenka gudaha lagu daro suurtagalnimada in aan la hubin, laakiin kama iman Bixiye dibadda ah, laakiin * gudaha * shaki ah Qayb ka mid ah qeexida dhismahan, waxa ugu muhiimsan in uu jiro shay gaar ah halkan hubaal.
Qodobkani waa muhiim sababtoo ah waxaan rabay inaan hubiyo in waxyaalahan ii muuqday inay run ahaantii run yihiin. Sababtoo ah sida aan bilowgii sheegay waxaa jira qof muhiim ah oo sidoo kale ah faylasuuf noocaas ah oo gebi ahaanba dafiray qodobkan laakiin wuxuu sheeganayaa dhinaca kale in uusan ka shakin wax u muuqda mid aan macquul ahayn.
Haddaba inta doodda halkan ka taagan tahay waxaad mooddaa in aad adiguna aad habkiisa u raacdo, markaa anigu maan arki karin sida mucjisadan loo soo saari karo iyo gaar ahaan fahamkaygii hore ee aan kuu sheegay in tani ay tahay shaki dibadda ah oo xagga aragtida ah ka dib su’aal ayaa imanaysa. sida ay tahay sababta 10% kaliya looga shakisan yahay oo aan ahayn 50% shaki habka. Laakiin waxaan arkaa inaad ku raacsan tahay habkayga aan halkan ku soo bandhigay.
Runtii, waxaa suurtogal ah in Shabbat uu soo jeediyay sharraxaad sharraxaysa isla faylasuufka iyada oo la adeegsanayo isku-dhafka sharraxaadda aan dhammaadka lahayn in kasta oo sharraxaad kasta oo sharraxaad ah u baahan tahay haddana miisaan yar ayay xambaarsan tahay, aniga shakhsi ahaan waxay u egtahay mid gebi ahaanba yaab leh haddii ay suurtogal tahay dhammaan. Laakiin taasi waa sida kaliya ee aan ku helay.
Su'aashani waxay sidoo kale muhiim u tahay mucaaradnimadaada sheegashooyinka asaasiga ah oo dhinac ah iyo suurtagalnimada hubaal la'aan dhinaca kale ah. Laakiin waxaad odhan kartaa waa nooc ka mid ah tatology. In kasta oo aan filayo in ay soo saartay faraqa u dhexeeya alaab-qeybiye dibadda ah (PM) iyo alaab-qeybiye gudaha ah (habka synthetic-kaaga).
Maya, lama hubo. Tani sidoo kale lama hubo.
xanaaqsan Waxay ku jawaabtay 2 sano ka hor
Miyaad aqbashay farqiga u dhexeeya sheegashadaada in malaha aasaasiga ah laftoodu ay ku jiraan male aan la hubin, iyo shakiga ka baxsan fikradaha aasaasiga ah laftooda? (Markaa ama waxaad helaysaa nidaam kale oo kontorool ah oo dhisme ahaan ah, ama waxaa lagugu xukumay sidii qof shaki leh).
Haddii kale runtii ma fahmin sida aadan uga shakin haddii aad ka shakisan tahay malo-awaal xitaa boqolleyda shakhsi ahaaneed (ilaa inta aysan ka mid ahayn male-awaal la mid ah oo aan la hubin).
Waxay iila muuqataa in uu jiro farqi halkaan ah oo aan laga yaabo in aanan fahmin sababtoo ah haddii aysan ahayn sidii aan idhi, gabi ahaanba ma fahmin sida aad u sheeganayso inaadan ka shakin. Waxaa laga yaabaa inaad sharaxdo qodobkan yar.
Runtii ma fahmi karo halka dhibku ka jiro. Waxaan leeyahay waxyaabo aad u fudud oo cad. Malahayga kuma hubo indhahayga. Maaha sababtoo ah waxaa jira waxyaabo aan macquul ahayn oo iyaga ku saabsan laakiin sababtoo ah ma hubo inay sax yihiin (waxaa jira waxyaabo kale oo macquul ah). Ma garanayaan waxa shakiga dibadda ahi yahay. Waxooga shaki ah ayaa igaga jira malo-awaalkayga. waa taas.
hadda waan helay? Waxay ku jawaabtay 2 sano ka hor
Shakiga dibadda Ujeedada ayaa ah in shakigu ka yimaado meel taban oo ah nooc ka mid ah jaahwareerka dibadda ee fikirka laakiin aan ahayn mid ka mid ah fikirka fikirka oo tusaale ahaan sheegaya in uu sax yahay 90% oo keliya kiisaska.
Laakin isla marka aad qortay: "Malahayga kuma hubo indhahayga". Sababtoo ah ma hubo inay sax yihiin (waxaa jira waxyaabo kale oo macquul ah). Markaa waxay u egtahay bixiye taban haba yaraatee haddii ay sidaas tahayna waad sii wadi kartaa sidoo kale:
Sababtoo ah waxay tusinaysaa inuu jiro "adiga oo fiirsada" iyo sida dibadda iyaga ah waxaad u eegtaa malo-awaalka. Tusaale ahaan waxaad ku fahmi kartaa masaalkaada ku saabsan indhaha maskaxda inay eegaan fikrado fog.
Laakiin haddii ay sidaas tahay, waa inaad qirataa inaad tahay qofka kala sooca (= indhaha?) Naftoodu waxay si buuxda u hubsan yihiin inay awood u leeyihiin inay fahmaan fikradaha aasaasiga ah si xitaa haddii aadan helin heerkooda saxsanaan si buuxda u dhammaystiran tahay weli waa inaad Si hubaal ah u aqbal in ay leeyihiin heer sugan oo sax ah, iyo qaar ka mid ah cabbirrada sida fogaanta fikradda, xiisaha iyo qaar kale oo badan. Markaa isla heerkaas oo dhan ha ka shakiyin in xitaa khaladaadka iyaga ku jira ay ku dhex jiraan dhismahan.
Laakin haddii aad mar kale shaki taban ku xoojiso:
1. Markaa waligaa ma awoodid inaad ka baxdo meertada shakiga. 2. Ma jirto sabab loo qaato in tirada tirakoobka la keenayo ay tahay 10% kaliya oo aan ahayn 50%. Tanina waa shaki buuxa 3. Waxa ay kuu horseedi doontaa in aad shakido oo aad aakhirka aqbasho in saxnaanta xaqiiqooyinkaaga shakhsi ahaaneed ay u janjeerto in ay eber ka dhigto tirada badan ee suurtogalka ah. 4. Waxa kale oo aad su'aal ka keeni kartaa mabda'a ah in shaki xun la saaro.